Nyocha na akwụkwọ Iacobus nke Matilde Asensi - Ikkaro dere
Inicio >> Akwụkwọ >> Iacobus nke Matilde Asensi dere
Omume a na-ewere ọnọdụ na XIII - XIV narị afọ, mgbe mgbasa nke Iwu nke oflọ Nsọ gasịrị. Onye mọnk nke usoro ndị agha nke delọ Ọgwụ de San Juan, nke amaara maka ikike ịpụpụ ya ma ọ bụ nyocha ya, bụ Pope John XXII zigara ka ọ nyochaa ọnwụ nke Pope Clement V na King Philip nke Anọ mgbe nkọcha nke Nna-ukwu Ukwu nke Order bidoro nke Templelọ Nsọ mgbe a na-egbu ya n’elu osisi.
Ọ bụ ihe Galcerán de Amụrụ, Il Persiquitore na nke a ga - ebute njem site na ndapụta dị iche iche dịka Paris, Avignon na Camino de Santiago na Finisterre. Na ijikọta, ndị agha, tempụlị, ụlọ ọgwụ na iwu ndị Juu gbasara akụkọ banyere onwe onye nke ndị isi akụkọ.
Ọ bụ njem na-agba ọsọ ọsọ ebe enwere nnukwu ọnọdụ akụkọ ihe mere eme na omume na njem.
Nkọwa na ntọala nke ebe ndị Juu na-atọ m ụtọ nke ukwuu, ebe ọ bụ na n'obodo m, anyị nwere ihe bụ ebe dị mkpa ndị Juu ruo mgbe ndị Ọchịchị Katọlik chụpụrụ anyị ma nke ahụ bụ mpaghara mara mma nke ukwuu taa. Gagharị na mpaghara ndị Juu taa na-eche akụkọ banyere oge gara aga.
Isiokwu ndị na-akpali mmasị icheta na nyocha
Mkpụrụ Montium na Las Médulas
Oge mgbe ị na-akọwa Las Medulas, nke kachasị Alaeze ukwu Rom mepere olulu igwu ọlaedo. Emi odude ke El Bierzo ke León.
Ọ na-akọwa na Ruin Montium ma ọ bụ nke dị mkpụmkpụ maka igwe ndị Rom jiri nweta ọla edo. Ọ mejupụtara ugwu.
Ihe a kpọrọ aha Pliny mere ka m cheta ihe ọzọ. Na ebube ya Akụkọ ihe mere eme, onye amamihe Rome kwuru banyere nnukwu nrigbu nke Emperor Emperor mere na Hispania Citerior azụ n'oge mmalite nke oge anyị. Otu ebe dị na Roman Hispania kwesịrị ka ndị ọkà mmụta niile lebara ya anya: Las Médulas, bụ ebe ndị Rom na-enweta puku pound iri abụọ nke ezigbo ọla edo kwa afọ. Usoro eji adọpụta igwe site na ala bụ nke a na-akpọ montium nbibi, nke gụnyere ịhapụ na nnukwu mmiri na mmiri dị egwu dị n'akụkụ kachasị elu nke Ugwu Aquilanos. Mmiri ahụ a tọhapụrụ gbadara n'oké iwe site na ọwara mmiri asaa, wee rute Las Médulas, tọrọ ya na ntanetị nke veranda ndị ohu buru ụzọ kpọbu, kpatara oke mbuze ma maa ụwa. A dọkpụụrụ ihe ndị ahụ a wụrụ awụ na agogas, ma ọ bụ nnukwu ọdọ mmiri ndị rụrụ ọrụ dị ka ebe a ga-asa ákwà, bụ́ ebe a chịkọtara ọlaedo ahụ ma hichaa ya. Ọrụ a niile na-aga n’ihu n’akwụsịghị akwụsị ruo narị afọ abụọ.
Banyere iwu ndị agha
Ihe na-eme ka m chee echiche na ụfọdụ isiokwu m chọrọ ịmatakwu banyere iwu dị iche iche ị kwuru
Iwu nke Hospitallọ Ọgwụ nke John John nke Jerusalem
Dị nnọọ ka ọ na-eme mgbe ị na-agụ Usoro Da VinciIhe atụ niile na-enye ohere ịnweta ozi sitere na gburugburu ebe obibi dị m ezigbo mma. Mbara, ọgazị ụkwụ, octagonal ụlọ, wdg.
Templars na Valencia, Sagunto, Ogige de Morvedre
Ọ na-amasị m iweta ihe ọmụma dị iche iche m na-enweta na gburugburu ebe obibi na gburugburu m.
N'ụzọ dị otú a na mgbe m hụrụ maka ihe atụ, ụzọ ha ga-esi amata ụlọ Templar site na octagonal ha, m na-eche.
Enwere ụlọ Templar ebe m bi?
Enwere ọmụmụ na ya
2 Ihe edeturu
2.1 Mkpụrụ Montium na Las Médulas
2.2 Banyere iwu ndị agha
2.3 Ihe omuma
2.4 Templars na Valencia, Sagunto, Ogige de Morvedre